रेखा-नीता अब कहिले खेल्ने सँगै फिल्म ? « Ramailo छ
रेखा-नीता अब कहिले खेल्ने सँगै फिल्म ?
रेखा थापा र नीता ढुंगाना समकालिन कलाकार होइनन् । तर फिल्मी करिअरको सुरुवातदेखि नै रेखा र नीता एकअर्का नजिक छन् । यी दुईले तीन फिल्ममा अभिनय गरेका छन् ।
फिल्म ‘मितिनी’मा नीताले रेखाको सानो उमेरको भूमिका गरेकी छन् । जुन फिल्मबाट दुबैले प्रशंसा पाए । ‘मितिनी’ पछि नै रेखाको फिल्मी करिअर द्रुत गतिमा अगाडी बढेको थियो । ‘मितिनी’ पछि रेखा र नीताको फिल्म ‘अजम्बरी नाता’ मा भेट भयो । तत्कालिन रेखा फिल्मस्ले बनाएको उक्त फिल्ममा नीताले अभिनेत्री निरुता सिंहको छोरीको भूमिका निभाएकी थिइन् । नीताको स्वरमा रेखाले गीत गाएकी थिइन् ।
नीता पहिलो पटक हिरोइन भएको फिल्म ‘हाम्रो माया जुनी जुनी’ लाई मा पनि रेखा अतिथि भूमिकामा थिइन् । अपोजिटमा स्व.अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठ थिए । व्यस्त भएपछि भने रेखा र नीताले सँगै काम गरेका छैनन् । रेखा र नीताको कहिले होला त एकसाथ स्क्रिन सेयर ?